Tsy havaozina ny Apps iPhone-ko! Ity ny The Fix. - Iphone
iphone 6 tsy mahazo signal
tsy avelako hanavao ny iOS 10 aho
ny fomba fanovana ny endritsoratra amin'ny iphone
ipad tsy mihodina mihitsy
Tsy havaozina ny Apps iPhone-ko! Ity ny Fix.
Hevitra tsara foana ny fanavaozana ny rindranasa iPhone amin'ny endriny farany - namoaka fanavaozana vaovao ireo mpamorona rindrambaiko hanamboarana bibikely sy hampidirana endri-javatra vaovao hatrany. Fa inona no azonao atao raha tsy hanavao ny apps iPhone-nao? Vakio hatrany raha te hahalala inona no tena mitranga rehefa tsy hanavao ny apps iPhone-nao ary ianaro fomba tsotra vitsivitsy ahafahanao manamboatra rindranasa iPhone izay tsy hisintona avy amin'ny fampiononan'ny tranonao manokana.
mety ve ny mihinana hena hen'omby rehefa bevohoka
Ireo karazana roa amin'ireo mpampiasa iPhone
Misy karazan'olona roa eto amin'izao tontolo izao: ireo izay tsy miraharaha fampandrenesana mena kely am-polony amin'ny iPhones-ny, ary ireo izay tsy afaka miala sasatra mora foana mandra-pahatongan'ny bubble farany manaitra azy ireo amin'ny fanavaozana, mailaka na hafatra dia karakaraina. an'ny.
Tafiditra amin'ny vondrona faharoa aho. Isaky ny mahazo ny bubble mena manjavozavo ny saiko App Store izay mampandre ahy ny fanavaozana ny rindranasa iPhone dia mitsambikina aho fa hahazo ny kinova farany haingana kokoa noho izay azonao lazaina hoe 'Twitter.'
Azonao an-tsaina ny fahasosorako, ary azoko an-tsaina ny anao, rehefa tsy havaozina ireo fampiharana iPhone ireo. Ity dia olana iray mampijaly mpampiasa iPhone marobe!
Fa maninona aho no tsy afaka manavao ny fampiharana amin'ny iPhone?
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia tsy azonao atao ny manavao ny apps amin'ny iPhone-nao satria tsy manana toerana fitehirizana ampy ny iPhone-nao, na satria misy olana rindrambaiko maharitra izay mila amboarina.
Ny dingana etsy ambany dia hanampy anao hamantatra sy hanamboatra ny tena antony tsy hanavaozan'ny fampiharana iPhone anao!
Tsy misy efitrano fanavaozana na fampiharana vaovao
Ny iPhone-nao dia manana fetra voafetra fitehirizana toerana mety mitaky be dia be amin'io toerana fitahirizana io. Raha tsy hanavao ny fampiharana ny iPhone dia mety tsy manana toerana fitahirizana ampy hamitana ny fanavaozana ianao.
Ny habetsaky ny efitrano anananao ho an'ny fampiharana amin'ny iPhone dia miankina amin'ny karazana iPhone novidinao.
Fanamarihana: GB dia mijoro ho an'ny gigabyte . Sehatra fandrefesana ny data dizitaly izany. Amin'ity tranga ity dia ampiasaina hilazana ny efitrano tsy maintsy itahirizan'ny iPhone sary, fampiharana, hafatra, ary fampahalalana hafa.
Azonao atao ny manamarina ny habetsaky ny fitehirizana ao amin'ny iPhoneo amin'ny fandehananao Fikirana -> General -> iPhone Storage . Ho hitanao hoe ohatrinona ny tahiry ampiasaina ary ohatrinona no misy. Raha liana amin'ny fampiharana izay mitelina ny habaka fitahirizanao ianao, mikorisa ambany dia ho hitanao ny lisitry ny fampiharana izay manana toerana betsaka indrindra amin'ny iPhone-nao.
Ahoana ny fomba hanamboarana toerana ho an'ny fanavaozana ny app
Raha saika ivelan'ny habaka ianao dia tsy ho afaka hanavao ny fampiharana iPhone na hisintona izay vaovao. Mora ny manala ireo fampiharana izay tsy ampiasainao intsony mba hanomezana toerana ho an'ireo vaovao.
Tsindrio ary tazomy ilay fampiharana tianao esorina mandra-pisehoan'ny menio. Avy eo, tap Esory ny App . paompy Delete App rehefa miseho eo amin'ny efijery ny fanovana fanamafisana.
Ny resadresaka an-tsoratra na iMessage, sary ary horonan-tsary dia kisoa fahatsiarovana hafa. Fafao ny resaka an-tsoratra lava be ary afindra amin'ny haino aman-jery ny fampitam-baovao hahitanao toerana amin'ny iPhone. Azonao atao koa ny mahita tolo-kevitra fitahirizana sasany ao Fikirana -> Ankapobeny -> iPhone Storage .
Raha vantany vao manadio efitrano amin'ny iPhone ianao, manandrama misintona ny fanavaozana ny fampiharana iPhone indray. Ny olana dia mety voavaha izao satria mazava ny toerana fitahirizana.
Ny iPhone Apps Na izany aza Tsy hanavao
Raha manana efitrano be dia be amin'ny iPhone-nao ianao, na nanao habaka bebe kokoa ary mbola tsy hanavao ny app iPhone dia miroso amin'ny dingana manaraka.
Andramo esory, avy eo avereno ny app
Raha miato ny app raha eo am-panavaozana azy dia olana misy rindrambaiko na fisie fampiharana no mety ho antony tsy hanavaozan'ny app iPhone anao. Azonao atao ny manala ny rindranasa sy mametaka azy amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana mitovy azonao ampiasaina mba hanomezana toerana ho an'ny fanavaozana:
Tazomy eo amin'ny kisary fampiharana ilay rantsantananao ary andraso hihifikifiany.
Kitiho ny X eo amin'ny zoro havia havia hamongorana ny fampiharana.
Vonoy farafahakeliny 30 segondra ny iPhone-nao, ary avereno indray.
Tsidiho ny App Store ary tadiavo ilay fampiharana izay nofafanao.
Sintomy indray ny fampiharana.
Ny fametrahana indray ny fampiharana dia hanala ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa anao, noho izany dia alao antoka fa mitahiry fampahalalana ilainao hidiranao indray ianao.
Mety hanome tsiny ve ny fifandraisanao amin'ny Internet?
Raha misintona fanavaozana ny fampiharana iPhone dia mila mifandray amin'ny Wi-Fi na ny tamba-jotra findainao ianao. Tokony ho fantatry ny iPhoneo ihany fa tsy maninona ny fampiasana an'io fifandraisana io mba hisintomana ny fanavaozana ny app.
Raha velomina ny Airplane Mode dia tsy ho azonao atao ny manavao ireo fampiharana amin'ny iPhone satria tsy hifandray amin'ny Wi-Fi na ny tamba-jotra findainao ianao. Mba hahazoana antoka fa maty ny Mode Airplane, sokafy ny app Settings ary alaivo antoka fa mijanona eo ankavia ny switch eo akaikin'ny Airplane Mode.
Zahao ny fifandraisana Internet
Ny fampiasana tamba-jotra Wi-Fi hampidinana ny fanavaozana ny app dia tsara satria tsy mampihena ny drafitra angon-drakitra findainao izany. Zava-dehibe ihany koa ny fahafantarana fa ny fanavaozana ny app izay 100 megabytes na mihoatra dia mety amin'ny Wi-Fi ihany no alaina.
Azonao atao ny mamantatra raha mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny iPhone amin'ny alàlan'ny fandehanana Fikirana -> Wifi . Ny jiro eo akaikin'ny safidy Wi-Fi dia tokony ho maitso, ary ny anaran'ny tamba-jotra izay alehanao dia tokony hiseho eo ambaniny.
Raha tsy mifandray amin'ny Wi-Fi ianao dia kitiho eo akaikin'ny Safidy Wi-Fi handrehitra Wi-Fi. Misafidiana tambajotra avy amin'ny lisitry ny safidin'ny Wi-Fi eo an-toerana. Andramo havaozina indray ny rindranasa iPhone anao indray mandeha rehefa mandeha ny Wi-Fi ..
Mampiasà Data Cellular hanavaozana ny fampiharana
Raha tsy manana Wi-Fi ianao dia azonao atao ny mampiasa ny tamba-jotra finday ahafahanao manavao ireo fampiharana. Raha hanamarina ny fifandraisanao amin'ny finday, sokafy ny Settings ary kitiho ny Cellular. Ny switch eo akaikin'ny Cellular Data dia tokony ho maitso.
Rehefa eo ianao, zahao raha azo antoka fa ny Roaming dia napetraka ao amin'ny Voice & Data eo ambanin'ny menio Safidy Data momba ny sela . Izany dia manome antoka fa afaka mifandray amin'ny tamba-jotra ianao na dia mieritreritra aza ny iPhone fa ivelan'ny faritra fonenanao ianao.
Fanamarihana: Ny ankamaroan'ny drafitra sela amerikana dia tsy mandoa vola fanampiny amin'ny fivezivezena raha mbola eto amin'ny firenena ianao. Raha manana fanontaniana ianao momba ny fiampangana ny roaming na ny zavatra fonosin'ny drafitrao dia zahao miaraka amin'ny mpitatitra anao na vakio ny lahatsoratray Inona no atao hoe finday sy finday mandeha amin'ny iPhone?
Fampiharana tsy manavao amin'ny sela mandeha ho azy?
Sokafy ny fikirana ary kitiho ny App Store. Hamarino tsara fa efa mandeha ny switch eo akaikin'ny App Updates. Rehefa misy fanavaozana ny fampiharana dia hisintona ho azy izy izao na dia tsy manana Wi-Fi aza ianao.
Avereno ny toe-javatra misy ny tamba-jotra
Tetika farany hanandramana hahazoana antoka fa tsy ny fifandraisanao no olana dia ny mamafa ny toerana misy ny tamba-jotra. Izany dia hahatonga ny iPhone hanadino ny tamba-jotra Wi-Fi ampiasainy. Hametraka ny fifandraisana misy eo amin'ny toerany ihany koa ny fomba nahatongavany fony izy ireo vaovao ny iPhone.
Raha ny fisian'ny fifandraisana no tompon'andraikitra amin'ireo rindranasa iPhone izay tsy hanavao azy io, dia manana vintana tsara hamahana ilay olana izany. Mila miditra ao amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao, ka alao antoka fa manana ny teny miafinao Wi-Fi mora ampiasaina ianao.
Raha hamerina ny fikirakira ny tambajotranao dia mankanesa any Fikirana -> Ankapobeny -> Famerenana -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra .
Olana amin'ny App Store
Indraindray ny fampiharana iPhone dia tsy hanavao satria misy olana amin'ny App Store. Na dia tsy azo inoana aza izany dia afaka midina ny mpizara App Store. Azonao atao ny manamarina raha manana olana amin'ny App Store i Apple amin'ny fizahana ny azy ireo tranokala misy ny rafitra rafitra .
Ajanony ary atsangano indray ny App Store
Raha efa mandeha ny mpizara App Store, saingy tsy hampivoatra ireo fampiharana iPhone anao, dia mety misy olana rindrambaiko kely amin'ny App Store amin'ny iPhone-nao. Mba hamahana ity olana mety hitranga ity dia hanakatona ny App Store izahay ary hamoha azy io indray.
Raha hikatona ny App Store dia kitiho indroa misesy ny bokotra Home. Avy eo, tsindrio ny App Store ambony sy avy eo amin'ny efijery. Andraso segondra vitsy dia sokafy indray ny App Store.
Zahao ny Apple ID anao
Mbola tsy mandeha? Hamarino tsara fa tafiditra ao amin'ny App Store ianao miaraka amin'ny Apple ID mety, avy eo manandrama mivoaka ny App Store ary miverina miditra. Mba hanaovana izany:
Misokatra Fikirana .
Tsindrio ny anaranao eo an-tampon'ny efijery.
Mikorisa ambany ary paompy Hivoaka .
Rehefa mivoaka ianao, dia hoentina miverina amin'ny pejy lehibe an'ny Fikirana. paompy Midira amin'ny iPhone-nao eo an-tampon'ny efijery hiditra ao amin'ny Apple ID anao.
Hamafana Cache App Store
Toy ny rindranasa hafa, ny App Store dia mitazona backup amin'ny fampahalalana izay ampiasainy matetika, mba hiasa haingana kokoa. Na izany aza, ny olana amin'ity cache ity dia mety hiteraka olana amin'ny App Store, toy ny fisorohana ny fampiharana iPhone tsy havaozina.
Hanadio ny cache an'ny App Store anao, sokafy ny App Store ary kitiho ny iray amin'ireo kiheba eo ambanin'ny efijery im-10 misesy. Hamarino tsara fa hitifitra in-10 misesy misesy ianao. Tokony hiposaka ny efijery ary avy eo hamindra ho azy ny fampiharana.
Alefaso amin'ny solosainao ny fanavaozana mandeha ho azy
Raha tsy hanavao ny iPhone ny fampiharana anao dia mety ho tsara vintana ianao raha manavao fampiharana amin'ny solo-sainanao. Raha te-hanavao ireo fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny solosainao, ampifandraiso amin'ny iPhone ny iPhone amin'ny alàlan'ny tariby taratrao, avy eo sokafy iTunes.
Ity safidy ity dia tsy misy amin'ny Macs mihazakazaka macOS Catalina 10.15 na vaovao.
tsindrio iTunes eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery ary kitiho safidinao .
Farany, kitiho ny kiheba fampidinana, zahao ireo boaty rehetra, ary kitiho ok .
Mialà, fampandrenesana fanavaozana ny app!
Raha efa nanandrana ireo zavatra rehetra ireo ianao, ary toa tsy nisy mandeha, dia azonao atao izany fafao ny iPhone-nao ary avereno aminy . Hesorina amin'ny iPhone ny fikirakiranao sy ny rindranasao rehetra, noho izany dia mila manangana azy toy ny vaovao indray ianao.
iphone tsy mamaky karatra karoka sim
Mety hahakivy tanteraka izany rehefa tsy havaozina ny fampiharana iPhone. Na eo aza izany dia manana ny fitaovana sy ny tetika ilainao hamahana ity olana ity ianao.
Manana fomba hafa tianao hanavaozana ny fampiharana iPhone ve ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!